Mai Chibwe VekwaZimuto: Kuziva mamirire akaita Mukadzi/murume
Munhu ane mukadzi/murume haafanigwi kusaziva mamirire akaita muviri weumwe wake. Unohwa murume mukuru agara makore kana mashanu achibvunza kuti weti yemukadzi inobuda napai, kureva kuti haana kumboongorora mamirire akaita panhu pomukadzi wake kana kumbobvunzawo mukadzi wake kuti zvinofamba sei. Anongotsvanzvadzira opinza chombo asingazivi kuti pakaita sei.
Isu vakadzi tinohwa kufara pamoyo kana murume achifarira kupaona nokupawana pachinakidza kuona. Mukadziwo anofanira kujairisa murume kuona. Murume ngaazive pane zvinhu zvese kuti agoziva kuzvishandisa. Asi bodo, varume vakawanda kutya kutarisa kunge panoruma. Ukaona une murume akadaro asingambodi zvokutarisa, unokwanisa kumupa basa rokuita ipapo. Unobva kwawabva wosvika kumba wotsvaka chimuchini chaanoshevha nachi ndebvu, womukumbira kuti akushevhe pamberi. Kana uchida kuona munhu anoita chinhu achinyatsoona kuti zvaitwa zvakanaka kumbira murume kukushevha womuudza kuti haunyatsi kupaona kana uchishevha wega.
Geza usati wakumbira, wobva wapapukuta zvakanaka pooma. Chibvisa hembhe umuvhurire makumbo woisa piro pasi pemagaro panhu ponyatsoti mbee pabani. Anoita zvinyoronyoro kusvika apedza iwe uchimubatsira nokumubatira panoda kubhenengugwa. Kana uchimuudza zvokuita muudze zvinhu nemazita azvo abve aziva kuti ichi ndeichi. Ukabva kuno kuguvhu uchidzira zasi unotanga kusvika pane chakafukidza bhinzi. Muvhurirepo achiona bhinzi kana yakamuka. Kana isina kumuka inomuka paanoshevha wowana chanzi yokumutaridza, zvichibva nokuti bhinzi yako yakakura sei. Kwahi vamwe vane zvidikidiki zvinonetsa kuona kana zemo pasina. Murume achibatabata achishevha haukoni kuita zemo.
Achishevha kudaro unoona wega kuti ari kunatsotarisa asi uku anenge atoti twii futi Usaita hanya nazvo iwewo unenge wava kunyorova nokuzvimbirira, asi rega apedze basa rawamupa, uye kuona zvaari kuita. Kazhinji murume achingopedza kukushevha mese menge mava nezemo zvokuti munopedzisira mava panyaya yerhoji yakasimba.
Zvinobetserei kuti murume azive mamirire akaita zvinhu pamukadzi wake? Zvinobatsira kuti kana paya muchitamba muchigadzirira kuti muvatane, azive pokubata nopokupurudzira. Pakushevha paya usangoshevhiwa wakanyarara, Rerusa hana utambe naye achishevha uchimuudza zviri kuitika. Nokuti pari kuzvimbiswa nei muudze azive kuti akadai panodai. Varume, zvikuru vechiShona, vanotya bhinzi yomukadzi pane ma Superstition anotaugwa pairi. Wana zano rokutaurira murume kuti apa ndipo pa headquarters yekunakigwa. Bhenengura zvakaifukudza woratidza murume kuti anosvikapo sei uye kana asvika anoiteipo. Vashoma varume vanoziva kuti bhinzi inonakira mukadzi kupfuura chutubu.
Vakawanda vanofunga kuti kupinzwa chombo ndiko kuri mberi kupfuura zvese. Kunaka kwechombo ndiko hako asi kana achiita pakawanikwa anokwiza nyama dzakatenderedza bhinzi chombo chiri mukatiwo haunonoki kupedza. Unotsanangurira murume wako kuti sokunakigwa kwaanoita kana chombo chake chichikwiziwa nemukati mechitubu, isuwo tine kachombo kedu kadikidiki kanonakawo kukwiziwa, asi kanokwiziwa nemaoko. Vakadzi vakawanda kana vaita zemo havachagoni kuti bhinzi chaiyo ikwiziwe kana kupurudzigwa nokuti hazviiti, inenge yanyanya kuita SENSITIVE. Asi kungokwiza zvakatenderedza bhinzi ndiko kungaitwa. Bhinzi pamukadzi ndiyo inonaka kupfuura zvese. Kana murume ari mukati achikoira pakupinda anodhonzerera nyama dzakatenderedza bhinzi zvichibva zvanaka.
Wodzika uchibva pabhinzi unosvika paburi reweti uri pakati pematinji. Harina kukura uye hazviiti kupinza zvinhu pariri. Ukavhura makumbo wobata matinji akavhurika murume anoona buri reweti riri nechapazasi pebhinzi. Kana achipurudzira bhinzi mumwe wake inopurudzirawo kaburi aka zvokuti pamwe haatombozivi kuti akapurudzira.
Achipfuura ipapo anosvika pa buri guru rinokwana kupinza mumwe. Ichi ndicho chitubu chaanopinza chombo. Kana achishevha anowana kusina vhudzi ikoko. Vhudzi rinokura kuno kumusoro pedo nekunebhinzi. Vashoma vakadzi vechi Zimba vane vhudzi rakawanda zasi. Vhudzi rinongomera pamativi epamberi pane ganda chairo. Pane ganda rakasiyana hapameri vhudzi pamatinji uchienda mukati hapana vhudzi, Uchienda kuzhe riripo. Paanozosvikako kunenge kwava kusinira kunyorova nokuda kwekubatwa-batwa. Tsanangura kuti kana achida kupinza chombo kunonyorova kosinira kuti usasvuuka paanokoira paya. Zvoita seoiri yemuchini wekusona inoita muchini ufambe zvakanaka oiri ichisvedza. Iyewo haasvuuki. Kunyorova uku ndiko kunoti pamwe achikoira unotohwa pachibuda soundi yokuti tyooo, tyooo, tyooo tyooo, kutonyatsohwa kuti panyoro.
Kuzopfuura ipapa akaramba achidzika unenge ava kuenda kumashure.
Pakati pemberi neshure panongori ne 2.5cm chete kumunhukadzi asina kumboita mwana uye asina zimuviri rakakora. Kana akakora uye aita vana, zvinosiyana kusvika pa 3.5 cm. Hakusi kure pamunhukadzi. Ndosaka dzimwe nguva kana ukafongorera murume murima anotadza kuita estimate yokuti paari kuda kupinza ndepapi ombotsvanzvadzira iwe wakangomirira. Unotohwa achibayabaya nechombo achitsvaka pokupinda.
Pamunhurume pakati pechombo neshure kure kupfuura pemukadzi zvokusvika pa 5-6cm. Zvinoitiswa nokuti pane chombo chake ndipo pane bhinzi yedu. Ukabva pabhinzi uchienda shure panoenzana nomurume. Hino isu tine zvimwe pakati. Izvi unofanigwa kuzviziva nokuti paya kana murume achizama kupinza chombo iwe wakavata nedumbu ukasasimudzira zvakanaka anokwanisa kunangisa kushure. Kana adaro akamboita soopinda shure ukamumisa asi atomboti pindei, usarega achipinza muchitubu asina kugeza nokuti mabacteria acho emberi neshure akasiyana. Ukamavhenganisa unokwanisa kuita chigwere.
Ndewekutoudza kuti dzikisa pazasi zvishoma (2-3 cm kudzika kana wakafongora, kukwira kana wakavata manhede), iwe ipapo wosimudzirawo kuti apinde nyore ongoti dzikei zvishomashoma wohwa oti sveverere godyo atova mukati.
Hino kana asingatozivi kuti pakangosiyana ne 2.5cm zvinonetsa murima, unotozoita zvokutora chombo iwe wochinangisa paunoda. Hameno kuti vane varume vanodhakwa vanoita sei. Asi kuva pedo kudai kwakaitigwa kuti chitubu chive panzvimbo yokuti murume anokwanisa kupinda kubva mberi kana kubva kumashure.
Mhuka zhinji dzinopinzwa nokumashure, Isu nedzimwe mhuka shomanana tinokwanisa mberi neshure iri ngari yokuti makumbo edu ane majoini akasiyana nedzimwe mhuka.
Murume akapaona pese apa kubva paguvhu kusvika pachitubu akapaongorora anoita education yakawanda panguva dikidiki. Haumbozonetseki kumuudza zviri kuitikako. Mutaridze usina kuzvimba usina zemo, wozomutaridzazve une zemo aone kusiyana kwazvo.
Kana usina vhudzi ipapa asi uchida kuti murume apaone unokwanisa kungomuudza kuti pari kugwadzirira ngaatarise aone kuti pane chii? Unoona otora nguva yakareba achitarisa. Murume haadi kufunga kuti pane chaitika panzvimbo iyoyi pamukadzi wake. Anobva aongorora kuti shuwa panei. Iwe chingomuti ko apa, ko apa, ko apa, uchimutaridza wakanyatsovhura makumbo achiona. Wana rimwe zano rokuti awane nguva achiona mamirire azvakaita. Isu takaroorana kukapera nguva yakapfuura gore, iye akazondibvunza kuti weti inobuda napai. Ndokuzomubvisira bhurugwa ndokumuratidza. Asati apaona aifunga kuti unokwanisa kukanganisa pokupinza ukapinza panobuda neweti. Shuwa munombohwa zvinosetsa kubva kuvarume vedu. Kungokasira kuda kupinza chombo chete munhu asina kuona kuti panhu pakamira sei.
Mukadzi ngaasajaira kupinzwa chombo murima segozho. Wana nguva yokuongorora zvakaita chombo chomurume wako. Unochipurudzira, wochigezesa kana muri mubhavhu mese, wochikweva ganda roenda shure kuti uone musoro wacho wakaurungana zvakanaka sehurungudo. Unokwanisazve kutarisa pano buda neweti pachibudazve nourume. Ukachibhendesa wakachitaridza kuguvhu wotarisa pasi pacho unoona pane mutsetse wakaita sokuti chakasoniwa netsono pachakabatanidzwa. Unoonazve kuti ganda racho rakasviba kupfuura ganda romuviri wese. Hameno kuti zvinorevei izvi nokuti pamuviri pese panopfekwa hembhe nguva dzese pasingasviki zuva hapana kusviba kuzhe kwepamberi chete.
Ukangoda kuchibatabata unoona chotomira. Ukakwevera ganda kumashure wotarisa pasi pemusoro unoona pakabatira ganda zvokuti zvinoita sepasina kusimba asi unoita makore nemurume haumbohwi achiti pabvaruka.
Uchaona futi kuti hachina kururama chero chakamira. Chinoita kubhendha. Hazvirevi kuti pane chakamboitika murume ari mwanana. Kunohi varume vane zvakati tasa vashomashoma. Usava nehanya nazvo anongorhoja zvakanaka akadaro.
Ukadzika zasi unoona kuti chihomwe chinemabhora ake anova ndiwo anogadzira urume chakarembera asi rimwe remabhora rakadzikira kupfuura rimwe. Kwahi ndizvo agogona kufamba asingazvikuvadzi. Isa mabhora ake muruoko uite seuri kupima uremu hwawo. Zvinohi varume vane mabhora mahombe vanohura kupfuura vane madiki, uyezve vane chanzi chokuita ngochani kupfuura vane madiki. Pakuzvara, hazvinei kuti murume ane makuru kana madiki, Usasvina chihomwe ichi nokuti unokwanisa kukuvadza murume zvokutomuendesa kuchipatara.
Chombo chinhu chinotonakidza kuchitambisa nokuti chinoita zvinonakidza. Kana unacho muruoko unokwanisa kutohwa kana kuona chichikura kusvika chaoma kuti gwaa iwe uchingopurudzira. Unoona tsinga dzinounza ropa rinova ndiri rinochiita chimire, dzati tande tande pachiri. Zvinohi chombo chinoda ma TABLE SPOON maviri kana matatu eropa kuti chimire. Ukada futi kupurudzira uchifuridzira seuri kufuridzira tii inopisa, unoona choti Gwii, Gwii, nehasha, woziva kuti nhasi ndiri kuoneswa ndondo. Jairira kutamba nochombo chomurume mumaoko nokuziva maitire acho.
Kana murume ari mukati achikoira iwe uchigamuchirawo nechiuno chakasimba. (chikapa) Panosvika pakuti murume anotadza kuita zvaanoda otanga kuoma mutezo. Unotohwa kuti haachazivi zvokuita. Ipapo ukapinza ruoko seri kwemagaro ake kana uchikwanisa, wokwenyerera paya patati pakati pechihomwe chemabhora neburi rekumashure. Kwenyerera wakatsimbidzira. Anokudirira zvese zvaanazvo ukasara wave guvi chairo. Chenjera nokuti vamwe varume ukaita zvausina kumboita anokutsamwira oti wakazvidzidziswa noumwe murume. Kana adaro muratidze Blog ino, womuudza kuti wakazvarigwa kunakigwa kwake saka basa rako nderokuita zvese zvinomunakira. Ipapo anozokubvunza mangwana chaiye nokuti anenge asisina simba rokufunga kana wapedza naye.
Varumewo dzidzisai vakadzi venyu kukwenyerera panhu apa panonaka kukwenya zvese pemukadzi nepemurume. Pemukadzi pese pese pakati pemakumbo kubva pamabvi zvichisvika pamberi pakangobatwa kana kupurudzigwa kana kunanzwa norurimi, panonaka.kana muri mubhazi ukangoisa ruoko pabvi romukadzi anobva atotanga kuhwa kuti nyevenyeve nyevenyeve pamberi. ukazokwidza watove kutsvaka zvisirizvo nguva yacho usina. Kujatirira kwebhazi kunoitisa zemo.
Hwisisa kuti kutarisa pikicha kwakasiyana nokutarisa mukadzi/murume wako waunokwanisa kubata nokubhenengura uchizvionera. Sokuti uchiona pikicha iyi haungabvi pano wofunga kuti waona pamberi pemukadzi. Hazvinei kuti pakuiona wamira chombo here.
Kuti ndidhirowe pikicha ino ndakatotanga ndatogwa foto nemurume wangu anova anohwisisa zvinhu zvamuri kuona izvi. Ndokuzokopera nepenzura ndodhirowa. Saka sokuona kwangu ndizvo zvakaita munhukadzi izvi. Kana une mubvunzo bvunza hako tinopindura.
Apa pakahi hapapinzwi chombo kanna murume asiri ngochani, hwisisa kuti pane zvakawanda zvinoda kuzikamwa nemi mese mumba.
1 Chokutanga ndechokuti ma BACTERIA ari muburi reshure akasiyana neari muchitubu. Kana mukafunga kupinzana kumashure uku, musazopinza chombo kumberi chambopinzwa shure. Asi munokwanisa kupinza shure chambopinzwa mberi.
2 Kune vasikana vakawanda vanoda kuvata nevakomana asi vasingadi kubva humhandara. Pakadai musikana anokuti kana uchida kumupinza pinza shure chete kuti asabva humhandara kuno kumberi. Murume kana aita fungwa yokupinza anopinza pese pawamubvumidza. Anenge ane kondhomu nechekare kana ari murume akachenjera saka hapana chaanotya.
3 Kotizve vamwe vanhukadzi vanoti zvinonaka kurhojewa kumashure.
4 Mukadzi haaiti mimba nokuiswa kumashure.
5 Buri rekumashure idiki pachitubu saka kumukadzi asina kumbopinzwako zvinokwanisa kugwadza kusvika ajaira.
Kune zvikomana zvemuraini zvisina kuita BIOLOGY kuchikoro zviri kundinyorera zvichikomburena kuti pikicha iyi inomisa chombo. Kana ichikumisa chombo iwe une mukadzi mumba, simuka undokumbira mukadzi wako afongore seizvi, unyatse kuongorora mamirire aakaita, pausingahwisisi umubvunze akutsanangurire. Kana usina mukadzi, chirega zvokuda kuziva kuti vakadzi vakaita sei pamberi. Hazvinei newe. Kana uri munhukadzi, hwisisa kuti nzwimbo yechitubu unobvumidza kupinzwa chombo nemberi uye neshure, asi mhuka dzese dzepanyika dzinoda zvekufongorera mhukarume. Kufongora kuri nani kana wada zvemimba. Urume hunonosara pamukova wechibereko chaipo. Mapedza usasimuka. imbovata hako nedumbu wakaisa pillow pasi pechiuno kuti chirambe chakakwirira urume husavhinza muchitubu. Woita kana half hour wakadaro.
Ndichaisawo pikicha yemurume ane chombo chimire.
Ichi chinonzi chii nechirungu?
Mavara epanhengo ndemuviri nezvokuvatana
Chikaranga (Chishona) / Chirungu (English)
Pane zveMurume/ About a man
Sterile man (Cannot make woman pregnant)
Kuchekwa ganda/ Kuchecheudzwa
Pane zve Mukadzi/ About a woman
Vulva (external characteristics)
Genital response to Sexual excitement
Twerking while coupled
Be on all four for rear entry
Elongation of labia minora
Kusura uchiiswa (mheche)
Vaginal fart, quif,
First sex for virgin
Vese Murume neMukadzi
Having sex/Making love
Posted by Mai E Chibwe at 05:18
HAA MAI MAKAPENGA
Murume anoona zvese here kana ndikafongora? Anoona mb**o take ichitondipinda here? Zvakanaka here izvozvo kana kuti zvinonyadzisa?
Hezvo!!!. Ko chakaipa kana kuti chinosvodesa pakuonekwa nomurume wakafongora chiiko? Saka munongoda kuvatana musingaonani musina kupfeka here? Haa Nyika ine vanhu vemarudzi akasiyana shuwa. Murme ndewako. Chinokusvodesa kuti aone paanopinza chombo chii? Kana watombobvisa bhurugwa chii chichahi chinosvodesa?